यी हुन् यौन शक्ति बढाउने चमत्कारिक घरेलु औषधी ! - Saptakoshionline
यी हुन् यौन शक्ति बढाउने चमत्कारिक घरेलु औषधी !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २१, २०७४ समय: ४:४३:३१
यौन प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । यसको चाहना सबैलाई हुन्छ । तर चाहना हुँदाहुँदै कतिपय पुरुषहरूमा यौन क्षमतामा कमी हुन्छ । जसको कारणले भियाग्रा जस्ता औषधीको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ । तर त्यसले पछि गएर नकारात्मक असर पार्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । यौन दुर्बलता भएकाहरुले भियाग्रा खाइरहनु पर्दैन । यौन क्षमता बढाउने घरेलु औषधीहरु प्रसस्तै रहेका छन ।